kaominina Maroambihy, Sambava ny mpitandro filaminana, raha ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny lehiben’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny vondron-tobim-paritra Sambava. Iarahana amin’ny manampahefana any an-toerana, indrindra ny mpisahana ny raharaham-pitsarana izao famotorana sy fanadihadiana lalina tanterahin’ny manampahefana ara-miaramila izao. Matin’ny mponina tany an-toerana nandritra ny fiarovantenan’ireto farany ireo telo lahy tamin’ny jiolahy valo izay avy nomono olona, ny zoma teo. Nandroba ny fananana sarobidy sy ny vola izy ireo raha nihevitra fa efa maty ilay voatafika. Noratrain’izy ireo tamin’ny zava-maranitra mantsy ny lohany.
Nanao fihetsika efa toy ny maty ny tompon-trano. Nony lasa ireo jiolahy, nampandre ny manodidina izy izay mbola vonton-dra ka raikitra ny fanenjehana ireo dahalo. Ny telo tamin’ireo jiolahy izay
mbola nikasa handratra ny mponina tany an-toerana tamin’ny alalan’ny zava-maranitra efa nandratrany ny tompon-trano no voasambotra. Niaro tena avy hatrany ireo fokonolona ka izao niafara tamin’ny fahafatesan’ireo malaso izao. Izay tsy notafihin’ny dahalo sy jiolahy mpamono olona dia miseho ho mpiaro ny fanetriben’ny firenena tahaka izao. Amin’ny tany miady toy izao, rehefa tsy mahavoa ny fahavalo dia matiny, hoy ireo mponina any an-toerana. Andrasana ny tohin’ity raharaha ity.